Nin U Dhintay Daawo Uu Cunay Si Uu Uga Hortego Coronavirus - Borama News Network %
Nin U Dhintay Daawo Uu Cunay Si Uu Uga Hortego Coronavirus
Labadan lamaane waxay ku jireen da’da 60-maadka.
“Waxaan aragnay isagoo saxaafadda la hadlaya. Tahan ma ahayn xaqiiqdii,” ayey tiri. “Trump wuxuu ku celceliyay in aasaas ahaan ay dawo wanaagsan tahay.”
“Waxaan ka baqeynay in aan xanuunsano,” ayey u sheegtay NBC.
“Waxaan billaabay matag,” ayey tiri. “Seygeygana waxaa ku dhegay naqaska.”
“Khubarada caafimaadka waxay xoojinayaan in chloroquine, oo ah dawo malaariyo, aanan loo adeegsan karin daweynta ama ka hortagga Covid-19,” ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday Banner Health.
Marka la eego xaaladda aan sahlaneyn ee ku xeeran Covid-19, waan fahamsannahay in dadka ay isku deyayaan in ay helaan qaabab cusub oo ay ku daweeyaan ama uga hortagaan fayraska, balse dawo inaad iskaa u qaadato ma ahan arrin wanaagsan.”
Isbuucii la soo dhaafay, Trump wuxuu sheegay in dawadan ay tahay mid macquul ah. Wuxuu Twiter-kiisa ku qoray in “fursad wanaagsan ay leedahay oo wax ka bedeli karta xaaladda taariikhda daweynta,” marka la qaado dawada antibiotic-ga ee azithromycin.
“Waxaan dooneynaa in aan dawadaas u diyaarino sida ugu dhaqsaha badan,” ayuu ka yiri shirkii jaraa’id ee isbuucii tagay uu ku qabtay Aqalka Cad.
Hay’adda FDA ee Mareykanka u qaabilsan Dawada iyo Cuntada ayaa isla markiiba qeexday in chloroquine aanan la ansixin, iyagoo sheegay in aysan jirin dawo la tijaabiyay oo daweyneysa ama ka hortageysa Covid-19″.
Qoraal ka soo baxay Laanta Xakameynta Cudurada ee Nigeria ayaa lagu sheegay in “Hay’adda Caafimaadka Adduunta ee WHO aysan ansixin isticmaalka chloroquine in lagu daweeyo Covid-19.”
“Fadlan haisticmaalin dawo uusan dhaqtar ku siin. Taas waxay kuu geysan kartaa dhibaato, waadna u dhiman kartaa.”
Deg Deg Somaliland Oo Go’aamo Hor Leh Ka Soo Saartay Coronavirus Shaacisayna In Ay Xidhayso Xuduudkeeda
Raysal Wasaaraha Dalka Hindiya Oo Ku Dhawaaqay Bandoo Uu Galiyay Dalkiisa Coronavirus Awgii
Madaxwayne Trump Oo Qudbadiisii Sanadlaha Ahayd Jeediyay Iyo Arimo Xasaasiya Oo Uu Ka Hadlay
Bnnstaff Bnnstaff February 5, 2020
Hasha Ugu Caanaha Badan Geela Hargeysa Lagu Dhaqo Oo La Shaaciyay Iyo 128 Halaad Oo Ay Ka Guulaysatay
Bnnstaff Bnnstaff February 14, 2020
Duurjoog Si Sharci Daro Ah Looga Ganacsanayay Oo Lagu Soo Bandhigay Magaalada Laascaanood.